Sein Lyan - စိ န် လျှံ: လတ်တလော ခံစားချက်
Writer Sein Lyan Time 1:45 pm
အားလုံး အဆင်ပြေသွားမှာ မောင်လေးရေ
အရသာ အစစ်ကို ခံစားဖူးမှာလဲ နော့..
အိမ်ကို ဖုန်းလေးတော့ ဆက်လိုက်ပါ
မေမေ့ အသံ ကြားရင်
ကဲ.. ညီမလေး နဲ့ နာမည် တူတဲ့
မမ တယောက် အားပေးသွားပါတယ်.. နော်
တော်တော်ခံစားတတ်တာပဲအေ... ငိုရင်ငိုပါ၊ နှပ်တော့ မထွက်စေနဲ့.....။
ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး နွေရာသီ အကျီင်္တွေ စုတ်ပြဲကုန်ပြီ ဆိုတဲ့ နေရာမှာ အခံစားရဆုံးပဲ.. (နှမျောလို့ )...
စ တာနော်.. နောက်ကနေ ဘလော့ဓားနဲ့ လိုက် နုပ်နုပ်စင်းနေဦးမယ်...လက်စလက်နရှိပြီးသားလူဆိုတော့ ၇ှိန်တယ်လေ.... အဟိ....။
၁။ အိမ်ကို ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ.. ငိုချင်ငိုမိမယ်၊ ဒါပေမယ့် ခွန်အားတွေ ပြန်ရလာလိမ့်မယ်...။
၂။ ခံစားစရာရှိတာ လွှတ်ခံစားတတ်ရင် ခံစားပါ၊ ပြီးရင် မေ့ပစ်လိုက်ပါ၊
၃။ အစ်ကို အစ်မတွေကို ချစ်တတ်မှန်းဖိုးစိန်ပေးထားတဲ့ ကောမန့်တွေကြည့်ရင် သိပါတယ်...။ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝမ်းနည်းစရာအကြောင်းတွေတွေးပြီး ငိုနေမယ့် အစား သူတို့ အောင်မြင်မှု၊ပျော်ရွှင်မှုတွေကို သတိတရ ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နေရင် သူတို့ ပိုပျော်မှာပါ....။
အဲလို ဆရာကြီး လုပ်ပစ်လိုက်တယ်၊ မှတ်ပလား...၊
ပုဆိုးနဲ့တော့ သုတ်နိုင်ဘူေးအ့ တစ်ရှူးပါတယ်...။
ကိုကြီး မေလေးမအားသေးတဲ့ကြားကခိုးဖတ်နေတာ ..ဝမ်းမနည်းနဲ့နော်
ငါးက အရှင်ခုတ်တာလား အသေခုတ်တာလား
အရှင်ဆို ဖြစ်နိုင်ရင် မခုတ်ပါနဲ့.
ခေါင်းကိုက်တာ ငါးနံ့ကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ဟိုတခါပြောတဲ့ နည်းလေးမျိုး သုံးကြည့်သေးလား.
ပိုင်ဇေရဲထွန်းခေါင်းလေးဆို ဘယ်နှယ့်လဲ. မိုက်တယ်နော်
ကိုလူထွေးခေါင်း အစမ်းလဲကြည့်လိုက်ပါလား. အဟား
မောင်လေးရေ ........မကြီး ဘယ်မှမသွားတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထာခဲ့ပေမယ့် မောင်လေးကို မကြီးဆီမှ ရှိသမျှအားနဲ့ အားပေးခဲ့တယ်နော်။ မကြီးလည်း မောင်လေးတို့ကို အ၇မ်းသတိရပါတယ်။ သူများအိမ်တွေ သွားလည်သလို မကြီးဆီကို မေးလ်ပို့ပြီး ရင်ဖွင့်နော်။ မကြီးလည်း ခံစားပေးမယ်လေ။ နိုင်ငံခြားမှာ နေရတဲ့ ဘ၀တွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကို နာလည်ခံစား လို့ရပါတယ်။ မောင်လေးလည်း အားမငယ်နဲ့နော်။ အချိန်မရွေး မကြီးတို့ဆီလာခဲ့ပါ မောင်လေး။ ဒီက မောင်နှမတွေက မောင်လေးကို လက်ကမ်းကြိုနေမှာပါ။
ဟီး မန့်တာအကုန် မမ တွေကြီးပဲ
ငိုတာရပ်တော့ ဆက်ငိုရင် ဆူနာမီ ဖြစ်သွားမယ်
ဘကြီးတော် ခံစားနေတာကို ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်ဗျာ။
စိတ်ဓါတ်မကျနဲ့ ။ ဝမ်းမနည်းပါနဲ့မျက်ရည်သုတ်လိုက်
တော့ဗျာ။ ကျွန်တော်ထင်တာ တစ်ယောက်ထဲခံစားနေ
တာထက် အဖေအမေတွေကို ရင်ဖွင့်လိုက်ရင် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က သူတို့ ရဲ့ မေတ္တာနှင့်တင် ပျောက်သွားလိမ့်မယ်။
ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးနဲ့ ။ ဘယ်လောက်ခက်ခဲပါစေ
ကိုကြီးဖိုးစိန်..နောက်တစ်ခါ ငိုရင် ဗွီဒီယိုရိုက်ပြီး ပို့ပေးပါ.. ဟိဟိ.. ကြည့်ချင်လို့..နောက်တာနော်.. ပျော်အောင်..တိတ်တိတ်..ငိုနဲ့.. ( ) မျက်ရည်မြေမကျကောင်း.. အဲ.. မှားကုန်ပြီ.. အဟိ.. နောက်တာနော်.. နောက်နေ့ များများထပ်သောက်လိုက်လေ..ဟိဟိး)
အဆင်ပြေမှာပါ ကိုစိန်ကလဲ .. စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ဗျာ.
ကျနော် လဲအားမပေးနိုင်လောက်တဲ့ အင်အားရှိသေးဘူး ကျနော် ကိုယ်တိုင်လဲ အကြီးကြီး ညစ်နေတယ် ...း(
နောင်တချိန်ကျရင် ဒီအဖြစ်တွေဟာ ရယ်စရာတခုလိုဖြစ်သွားမှာပါ တို့မေမေကပြောဖူးတယ် အရှုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာ အောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့ ပန်းတပွင့်ကအမြဲ စောင့်ကြိုနေတယ်တဲ့ အားတင်းထားပါ
မိဘဆိုတာ သားသမီအောင်မြင်မှ ချစ်ကြတာ၊ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုဖိုးစိန်ရဲ့ သိတတ်မှုတွေကိုလည်း မိဘတွေက ခံစားမိမှာပါ။
ပထမဆုံး စိတ်ကို အေးအေးထားပါ။ ပြီးရင် အားလုံးကို တခါတည်းဖြေရှင်းဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ တခုချင်းဆီဖြေရှင်းပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ။
မန့်လို့ကိုမရဘူး။ စက်က အကောင်ကိုက်နေလို့။
ဆင်တလာ ပြောတဲ့ အချက်3ချက်ပို ထောက်ခံပါတယ်။
စိတ်ထွက်ပေါက် ဖြေတဲ့နည်းကိုတော့ မကြိုက်လှဘူး။
ညီလေးရေ....ဘာတွေ ဘယ်လိုပဲ ကြုံရရပါ။ မိဘကို လုပ်ကျွေး ပြုစုချင်စိတ် ရှိသူဟာ ဘယ်တော့မှ မတိမ်ကောပါဘူး။
အခိုက်အတန်ံ၊ အါမှမဟုတ် အချိန်အတိုင်းအတာ တခုအတွင်းမှာ အဆင် မပြေတာလေးတွေကို ညီလေး ဖြတ်ကျော်နိုင်မယ် ဆိုတာ အကို ယုံထားပါတယ်။
(မှတ်ချက်၊ အမှတ်မရတဲ့အတွက် ဒဏ်တပ်ပါမည်)
ဖတ်ပြီးတော့ မျက်ရည်တွေ၊ နှပ်တွေ ထွက်လာလို့"...ပုဆိုးတစ်ထည် တွေ့ ပဟေ့၊ သုတ်မယ်ဝေ့..." အားတင်းထားကာမှ တွဲလောင်း၊ တွဲလောင်းတွေ တွေ့ လို့ဒါဟာ ကိုဖိုးစိန်နဲ့ရှေ့ က ကွန်မန့် သမားတွေ လက်ချက်ပဲ အတတ်သိလိုက်တယ်...။
အဲဒါနဲ့မထူးဘူးဆိုပြီး မျက်စိရှေ့ မှာ မြင်တဲ့ ပင်လယ်ထဲ ဆင်းပြေးပြီး ပင်လယ်ထဲမှာ အစဖျောက်လိုက် တယ်ဗျာ..။ :P
အလကား စတာပါ...။ ကိုဖိုးစိန် ရေးထားတာတွေ ဖတ်ပြီး အတော် ခံစားရပါတယ်ဗျာ...။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလဲ အမြန်ဆုံးတိုးတက်ပြီး ကိုဖိုးစိန်လဲ အမြန်ဆုံး ဖာသာကြီးဆီ ပြန်လာနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်...။
သယ်ရင်း စာကိုဖတ်ပြီး ငိုချင်လာလို့ သယ်ရင်း
ရဲ့ ပုဆိုးလေနဲ့ မျက်နှာတစ်ခုလုံးကို အုပ်ထားမိလိုက်တယ်ကွာ။
ကိုယ်ကိုတိုင်သာ ဘာဖြစ်နေနေ ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်
တဲ့ ညီအကိုမောင်နှမတွေကို လုံးဝစိတ်ဓာတ် မကျစေချင်ဘူး။
ဟုတ်တယ်သယ်ရင်း စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ချင်နေတာနဲ့
ခုလက်ရှိဖြစ်နေတာတွေက စိတ်နောက်ကို မလိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်သယ်ရင်း။
ဘူးဖြစ်နေတော့ ဘယ်လောက်ပဲ ပျော်အောင်နေနေ တစ်ခါတစ်ခါ ဦးနှောက်က လုံးဝလက်မခံဘူးကွာ။
အဲဒီစိတ်ကြောင့်ပဲ မလုပ်သင့်တာတွေ ကို လုပ်နေမိပြန်တယ် သယ်ရင်း
သယ်ရင်းကိုနားလည်ပါတယ်ကွာ။ ခုလို သယ်ရင်းရဲ့ ရင်ထဲမှာ ခံစားချက်ကို ဖေါ်ပြနိုင်
တာကိုက သယ်ရင်းကို ချီးကျူးတယ် သယ်ရင်း။
အကြံပေးချင်တယ်သယ်ရင်းရယ် တစ်ခုလောက်တော့။ စိတ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်မဲ့
အလွန်အကျွံ လည်းမဖြစ်အောင် အမြဲတမ်းလည်း မျော်လင့်လို့ရတဲ့ စိတ်ထွက်ပေါက်ပေါ့ကွာ။
ကိုယ်လည်း သယ်ရင်းနဲ့ ဘဝတူပါကွာ။
ကိုယ်က ပိုက်ဆံရှာနေရင်းနဲ့ ပိုက်ဆံက ဘယ်ရောက်နေမှန်း ကိုမသိတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်။
သယ်ရင်း ငိုလို့ ဝအောင် ငိုသာငို သယ်ရင်း
အထီးကျန်တယ်လို့ ခံစားရတဲ့ လူတွေရဲ့
စိတ်ပူနေရင်းတောင်မှ ငိုလိုက်မိတဲ့ အတွက်
စိတ်ထဲ နည်းနည်းတော့ သက်သာသွားလိမ့်မယ် သယ်ရင်း။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျန်မာရေးတော့ ဂရုစိုက်စေချင်တယ်။ မိဝေး ဘဝေး နေနေရတဲ့ ဘဝကိုနားလည်တယ်သယ်ရင်း။
လောကမှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူး သယ်ရင်း မဖြစ်သေးတာပဲရှိတယ်။
ဘာမှ အားမငယ်နဲ့ သယ်ရင်း
သြော်.ဖိုးစိန်နှယ်။ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆို။ ရပါတယ်ဟ။ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း အဲဒီလောက်ထိ ဖြစ်မသွားပါနဲ့ဟ။ အားလုံးက နားလည်ပါတယ်။
အဲ..နောက်.အဲဒီလို အရက်များများမသောက်ဖို့ပဲ အကြံပေးပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအရပါ။
အဆင်ပြေပါစေနော်။ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိလို့ ဆုပဲတောင်းပေးလိုက်တယ်။နှပ်ချီးကိုတော့ ဘေးနားမှရှိတဲ့ သားလေးဘောင်းဘီအဟောင်းနဲ့ပဲသုပ်လိုက်တယ်။
ကိုဖိုးစိန်ရေ ရောက်တယ်။ ပါးလုံးလေသိလား ကိုဖိုးစိန်ရဲ့ မကြီးရောင်စကပ်ဖတ်ပြီးကတည်းက ကျောင်းမှာလည်း ခေါင်းထဲဝင်လာပြီး ပြုံးမိတယ်။ တခါတလေ အော်ပါရယ်မိတယ်။ အဲ့ဒါတပတ်လုံး အဲ့ဒါအကိုများအသစ်တင်မလားဆိုပြီး ကျောင်းရောက်ရောက်ချင်းလာတာ။ အခုလည်း သေသေချာချာဖတ်ပြီး ထပ်တူခံစားသွားပါတယ်ဗျာ။ မဖတ်ခင်ကတော့ အ၀တ်မယူခဲ့ဘူးဗျ။ အခြေအနေမကောင်းတော့ ကိုယ့်အ၀တ်ကိုယ်ကိုင်ပြီး ပြန်လာခဲ့တာ။ တစ်ရှူးလေးလေ တော်သေးတာပေါ့ မဟုတ်ရင်ကိုဖိုးစိန်ထားထားတဲ့ အ၀တ်ကြီးသုတ်နေရဦးမှာ ကြက်သီးတောင်ထတယ်။ အဟိ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
တောင့် ခံထား အကိုရေ
ဘယ်လို ပြောပြရမှန်းတောင် မသိပါဘူး
စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့။ ခုချိန်မှာ အဖေဖြစ်စေချင်သလို ကျောင်းမတက်နိုင်ပေမဲ့ အဲဒီ အဖေ့ရည်ရွယ်ချက် ပျောက်မသွားစေနဲ့။ တနေ့နေ့ ငါ ကျောင်းတက်မယ်၊ ပညာနဲ့ အသက်မွေးမယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ထားပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အလုပ်လုပ်ပါ။
လူကြီးတွေက သားသမီးမျက်နှာ အရိပ်ကြည့်နေတာပါ။ သူတို့ သိပါတယ်။ မပြောလို့သာပါ။ မိသားစုနဲ့ အမြဲ ဆက်သွယ်နေ၊ ဒါက ကိုယ့်အတွက် အားဆေး။ မိဘအတွက်လဲ အားဆေး။ စိတ်ညစ်ပြီး အရက်သောက်တာ မူးတာ မလုပ်စေချင်ဘူး။ ဒါဟာ ထွက်ပေါက် မဟုတ်ဘူး။ ငါ ပျော့ညံ့လို့ မဖြစ်ဘူး ဆိုပြီး အားတင်းပါ။ စိတ်ကို ခိုင်ခိုင်ထား။ ဘလော့မောင်နှမတွေ ဒီလောက် ချစ်ကြတာ အားငယ်စရာမှ မလိုဘဲ။ ဖိုးစိန်က တော်ပြီးသား။ အမ ယုံတယ်။
ဒီလို အသက်အရွယ်မှာ တချို့တွေ ကိုယ့်လိုတောင် အဆင်မပြေတာ အမြဲသတိရပါ။ ငါ သူတို့ထက် အခွင့်အရေး အများကြီး ရှိတဲ့နေရာမှာ ရှိနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခွင့်အရေးဆိုတာ ကိုယ်က ယူမှ ရတာ။ နို့မို့ဆို စိတ်ဓာတ်ကျနေရင် ကိုယ့် ရည်မှန်းချက် ပျောက်လိမ့်မယ်။
18 June 2009 at 19:00
မျှော်လင့်ချက်ဆိုတဲ့ တံခါးမကြီးက တစ်ခုတည်းမှမဟုတ်တာ
ရှစ်ခါလဲရင် ကိုးခါ ပြန်ထဖို့ ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါ...
မေလေးခုမှအားလို့နောက်ကျသွားတယ်..ဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့..မေလေးလဲမိဘတွေရဲ့ နားလည်မှုလွဲတာခံခဲ့ရဘူးတယ်..အချိန်တန်တော့လဲ သူတို့နားလည်မှာပါ..ဖုန်းတော့ဆက်ပါ ကိုကြီးရယ် မိဘဆိုတာကိုယ့်သားသမီးအသံတော့ ကြားချင်တယ်လေ..ပစ်တိုင်းထောင်လိုကျင့်စမ်းပါကိုကြီးရာ
မေလေး မေးလ်က sonenaingkhwint@gmail.com
ဖြစ်ချင်ဆုံးကို မျက်ခြေမပြတ်နဲ့ 
လူဆိုတာတယောက်နဲ့ တယောက်အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီလို့ ပဲရတယ်။
တယောက်ကိုတယောက် တာဝန်ယူပေးလို့ မရဘူးတဲ့။
မိဘကို အမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောလိုက်တာကောင်းတယ်။ ဒါမှ သူတို့ လည်း ဖိုးစိန်အတွက် အကြံညဏ်ပေးနိုင်မယ်။
နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်တဖက်နဲ့ ကျောင်းတက်တဲ့သူတွေများပါတယ်။ ပညာသင်နေတုန်းတော့ ဘယ်ထောက်ပံ့နိုင်မှာလဲ။
သေချင်တယ်လို့ ပြောလာတာ တော်တော်စိတ်ဓါတ်ကျနေတာကို ပြတာပဲ။
သူများ အမှု့ တွဲတွေတောင် ဖော်နိုင်တာ ဆားပုလင်းဖိုးစိန် ကိုယ့်ကိစ္စ ကိုယ်သဲလွန်စ ပြောက်နေလား။
18 Jun 09, 20:09
kom: အစ်မမလာလဲချစိတယ်။ အစိမလာလည်းချစ်တယ်ဆိုတာ မှတ်ထားလိုက်ပါ။ ဝမ်းမနည်းနဲ့ တိတ်..တိတ်..
kom: တို့ကအသည်းမာတယ။်ငိူပါဘူး. ပုဆိုးမလျော်ဘူးဆိုတာလည်းသိနေတာဘဲ။ အစ်မပြောတာတွေ သိတ်မခံစားနဲ့ တစ်ခါတစ်ခါ ယုံရတာမဟုတ်ဘူး မမိုးချိူသင်းဆိုသိတယ။်။ ချင့်ယုံ. သိတ်မခံစားနဲ့။ ဖိုးစိန်လေးကိုချစ်ပါတယ်။ အစ်မမလာလဲချစ
kom: နျပ်တွေသုတ်လိုက်တော့. ရော့တစ်ရှုး
စိတ်ကို နဲနဲ relax ပေးလိုက်
WAKE UP! YOU'RE STILL LOST..! WAKE UP AND THINK! THERE'RE LOTS OF THINGS YOU CAN DO WITH UR BEST! DON'T GIVE UP!
အောင်မလေးတော် ....ငိုချက်ကတော့ ....
ဂလိုဘဲဟေ့ ၊ နိုင်ဂံချားဆိုတာ
ဘ၀သံသရာ ၊ ငိုလိုက် ရီလိုက် ၊ ခရီးဆက်ကြရမှာ...... အဟမ်းအဟမ်း အသံကနဲနဲဝင်နေတယ်....ဟဲဟဲ
အင်း မောင်ဖိုးစိန်တို့.... ဒေါ်မနော်ဟရီတို့.....အက်စထရာ အက်စထရာ....ဘလော့ဂ်ဂါတွေကမှ ကျမထက်သာပါသေးတယ် ........ စိတ်ထွက်ပေါက်ကလေးနဲ့ အားပေးမယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့.............
ဖုန်းခသာအကုန်ခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ကတော့မိဘတွေဆီကိုဆက်စေချင်ပါတယ်။ အမဆို ဖုန်းခနဲ့ကို ဘိုင်ကျတာ လတိုင်း ။ မိဘတွေကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်လေ။ အဟဲဟဲ ဖုန်းပြောရင်းကောက်တာတို့ ငိုတာတို့ကလွဲရင်ပေါ့.........
အင်း ခပ်ရှည်ရှည်မန့်တတ်သူဆိုတော့ ခွေးလွှတ်ပါမောင်ဖိုးစိန်၊ နောက်တစ်ခေါက် မေခဘလော့မှာနံပါတ် ၁ နေရာလာလုအုန်းမှာ မကျေပွဲ .
စိန်ပြောတယ်လေ.. စိတ်မကောင်းစရာလို့တွေးရင် စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာပဲ ဆိုတာ.. ဒီလိုမတွေးပဲနဲ့ ငါလုပ်စရာတွေ ကျန်နေသေးတယ်လို့ပဲ တွေးပါ..
လူဆိုတာ သူများကို မှီခိုချင်တဲ့အချိန်လဲ ရှိမှာပဲ.. အဲ့ဒီအချိန်မှာ စိန့်ကို အားပေးမယ့်လူတွေလဲ တစ်ပုံကြီးပါ..
ငိုချင်တယ်ဆိုလဲ ငိုလိုက်.. ရင်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုလဲ ဖွင့်လိုက်.. ပြီးသွားရင်တော့ အရင်လိုပဲ အားမွေးပါ.. စိန် လုပ်နိုင်တာ မ သိတယ်.. စိန့်မှာ ပန်းတိုင်ဆိုတာလဲ ရှိပြီးသားပဲ
အင်း..ခုတလော ဘလော့ကာတွေ ဘလော့နာဖြစ်နေ
တစ်ယောက်မှလည်း အကောင်းမတွေ့ဘူး..ကိုယ်တိုင် လည်းကျန်းမာရေးကတော်တော်ဆိုး..ချိုသင်းလိုတော့ ဒီတောင်ကိုကျော်နိုင်ပါ့မလားတွေဘာတွေမတွေးပါဘူး
ဒီလိုပဲ ဖိုးစိန်လည်းသေလို့မဖြစ်သေးဘူး ...စိတ်လျှော့ လို့အချင်းချင်း ခပ်တည်တည်နဲ့ ဆရာကြီးလုပ်ခဲ့တယ် ဒါပဲ
မျက်ရည်တော့ မကျဘူးလို့ပဲ လိမ်ပြောခဲ့မယ် မဟုတ်ရင် မျက်ရည်သုတ်ရမယ့်အရာက ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူး..း) ၀
(ဒီလောက်ဆေးလုံး ကွန်မင့်တွေရတာ သောက်လိုက် ပြီးရင်နေကောင်းအောင်နေတော့..)
19 June 2009 at 02:51
ကဲ .. ကဲ ...
ရှေ့ ကလူ တွေ ပြောသွား ကြတာ အားလုံး ကုန်သလောက်..အဲ ...စုံ သလောက် ရှိသွားပြီ ။
ဘာမှ ဆက် မပြောချင်တော့ဘူး ။
မနက်ဖန် အိမ်လာလည် ။
မျောက် မူးလဲ အတွက် စပါယ်ရှယ် ပစ္စည်း တခု ကုမ္ပဏီ ကမှာထားပေးတယ် ။
နောက်ကျမှ ဝင်လာတာ .. မန့် တဲ့ တခန်းလုံး လဲ နှပ်တွေ ..နဲ့အနံ့ အသက် သိပ်မကောင်းတော့ဘူး ။
ဖြစ်ချင်တာဖြစ် စိတ်မညစ်နဲ့။လိပ်ဖြစ်တာ အခွံထူလို့ ။
19 June 2009 at 04:43
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွယ်။ ဒီအခြေအနေထိတောင် တောင့်ခံခဲ့ ပြီးပြီပဲ။ အားတင်းထားပါ။
ငိုချင်သလောက် ကို အားရပါးရ ငိုပါ။ ပြီးရင်တော့
ဆက်ငိုချင်တဲ့ စိတ်လေးကို ဖျောက်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ ဆိုတာကို စဉ်းစားပေါ့။ “ဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်မညစ်နဲ့ နောက်ပြီးရင် ကောင်းသွားမယ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးလိုပေါ့။ ကိုယ်လုပ်စရာ ရှိတာတွေကို လုပ်နိုင်သလောက် လုပ်ပြီးပြီ ဆိုတာ သေချာရင် ငါ့မောင် စိတ်ချမ်းသာလိုက်ပါ။ အဓိက ကတော့ တပြည်တစ်ရွာမှာ စိတ်ချမ်းသာ အောင်နေပါ။ မင်းမိဘတွေကလည်း ဒါကိုပဲ လိုလားမှာပါ။ ဖိုးစိန် ကံကောင်းပါစေ။
19 June 2009 at 04:52
19 June 2009 at 06:20
မျက်ရည်တစက် တောက်ခနဲ ကျသွားတယ်... :P
ဘာဖြစ်ဖြစ် စိတ်မညစ်နဲ့လို့ပြောချင်ပေမယ့် ... ညစ်ကြရတာပါပဲလေ။
မိဘအတွက် ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ စေတနာအပြည့်အ၀ထားပြီး ကျေးဇူးဆပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေပေးပါ... အမြဲနှလုံးသွင်းထားပါ။ စိတ်ချမ်းသာ ပီတိဖြစ်ရမှာပါ။ ယောက်ျားလေးဖြစ်လျက်နဲ့ မျက်ရည်ခဏခဏကျနေရတယ် ဆိုတော့ ခံစားရချက် အတိမ်အနက်ကိုလှမ်းမြင်မိပါတယ်။ တပါးသူတွေအပေါ် ထားရှိတဲ့ မေတ္တာရဲ့အကျိုးကို တန်ပြန်ရရှိကျေနပ်မိသည်အထိ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်မှုများ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ...။
မသိမတတ်တဲ့သူက ဆရာကြီးလုပ်ကြည့်တာ ... ဟီး... ပေါတောတောများဖြစ်နေမလား? ဒါပေမယ့် တကယ့်စိတ်ရင်းနဲ့ပါနော်။
ငိုနဲ့တော့နော် :) ... တိုင်းတပါးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျန်းမာရေးကိုတော့ ဂရုစိုက်ပါဗျာ ။
အခုမှ ဖတ်ဖြစ်တရ် ။ လောကမှာ ဒီလိုပါပဲ အကိုရေ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်မညစ်ပါနဲ့ ။ ယောက်ျားလေးလေ လောကကြီးမှာ ဒေါင်ကျကျ ပြားကျကျ နေနိုင်ရမယ် ။ ကျွန်တော့်ကြောင့်လည်းစိတ်မညစ်နဲ့ ဘယ်သူ့ကြောင့်မှ စိတ်မညစ်နဲ့ အကိုပျော်ရွှင်နေတာကိုပဲ မြင်ချင်ပါတရ် ။ တစ်ခုခုရင်ဖွင့်ချင်ရင် ညီ့ဆီကို မေးလ်ပို့ထားပေါ့ ။ ညီ ညနေကို ခရီးထွက်တော့မှာ ။ ကြာမယ် ပျော်သလောက်ပေါ့ ။ စိတ်လက်ပြေပျောက်လောက်ပြီထင်ရင် ပြန်လာမှာပါ ။ ခုနှုတ်ဆက်တာ ။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ ။ အကို့မှာ ခံစားရတာများရင် ညီ့ဆီကို မေးလ်ပို့ထားပေးပါ ။ စောင့်နေမယ်
Your Lovely Brother (အရဲလေး)
ကိုဖိုးစိန် .. အရောက်နောက်ကျလို့ တစ်မျိုး မထင်စေချင်ပါဘူး .. ကျွန်တော်လည်း စာမေးပွဲက တစ်ဖက်နဲ့ ရောက်လာတော့ ၄၃ ယောက်မြောက်တောင် ဖြစ်နေပြီ .. ဖတ်ပြီးတော့ ဘာပြောရမှန်း မသိဘူး ... ပြောချင်တာတွေများပြီး စကားလုံးတွေ အစရှာမရဘူး ဖြစ်နေတယ် .. ပြောမယ့်သာ ပြောတယ် .. ဒီအချိန်လောက်ဆို ကိုယ်အားပေးမယ့် စကားက အစပြန်ဖော်နေသလိုများ ဖြစ်နေမလားလို့တောင် ထင်မိပါတယ် .. အဲလိုလည်း မဟုတ်ရပါဘူး ... အခု ခံစားချက်တွေ အနည်ထိုင်သွားပြီ ဆိုရင်တောင် နောက်တစ်ခါ ဒီလို အဖြစ်မျိုး မဖြစ်စေဖို့ .. နောက်တစ်ခါ စိတ်အားမငယ်စေဖို့ အားပေးခဲ့ချင်လို့ ဒီကောမန့်ကို ရေးတာပါ ... ခံစားပါ ငိုချင်ရင် ငိုလိုက်ပါ .. ဒါပေမယ့် ရေရှည်အတွက်တော့ နာကျင်မှုတွေ ကြေကွဲမှုတွေ ဆွဲယူမသွားပါနဲ့ .. နောက်ပြီး စိတ်ညစ်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်စိတ်ကို ပိုပြီးနောက်ကျိစေမယ့် အရက်၊ ဝိုင်ဆိုတာမျိုးတွေ မသောက်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားစေချင်ပါတယ် .. နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ နေနေကြတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ အားလုံး အခက်အခဲ ကိုယ်စီနဲ့မို့လို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မျှဝေခံစားတဲ့ သဘောပါ ... ဆရာလုပ်တာလည်း မဟုတ်ရပါဘူး ... ခံစားချက်တွေ ပေါ်လာခဲ့ရင် တစ်ခြားအရာတွေ လုပ်မယ့်အစား ဒီဘလော့လေးကနေပဲ ဖွင့်ထုတ်လိုက်ပါ ... ကျွန်တော်တို့လည်း မျှဝေခံစားရင်းနဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်နိုင်မယ့် အကြံဥာဏ်တွေ ပေးချင်ပါတယ် ...
ကိုစိန် ဘာဖြစ်ဖြစ်အားတင်းပြီးဆက်လျှောက်ပါနော်။ ဘ၀က ဘောလုံးပွဲလိုပဲလေ စပြီးပြီဆိုရင် တော့
မိနစ် ၉၀ ပြည့်အောင်သာဆက်ကန်ပေတော့။ ဒါမှမပြီးနိုင်သေးရင် လည်းအချိန်ပိုကန်တဲ့အခါ နိုင်အောင်ကန်ရမယ်လေ။ ကိုစိန် အောင်မြင်ပါ
ဒီလောက်လည်း ၀မ်းမနည်းပါနဲ့ ဗျာ.... ပန်းတိုင်က ကို့ နားမှာ ရှိပြီးတာပါ... နောက်ထပ် ခရီးဆက်ဖို့ က ကို့ တာဝန်ဘဲလေ... ဘာမှဖြစ်မနေနဲ့ ... ကျနော်တို့ညီအစ်ကိုတွေ အစ်ကို့ နောက်မှ ရှိကြပါတယ်ဗျာ..
ကိုကြီး...နေမြန်မြန်ပြန်ကောင်းပါစေ...ညီမလေး အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ ....မဂလဆ ကိစ္စလေ...
:P ... ပုဆိုးလေးအလစ်သုတ်သွားတယ်...
နိုပြန်ပရား.. နိုပါနဲ့ရှို..... ဘဝဆိုတာ ဒီလိုပဲကောင်လေးရ၊ စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့၊ အဓိကကတော့ ဘယ်အရာကိုမှ ပုံသေ မျှော်မှန်းမထားနဲ့၊ အကောင်းဆုံးကိုတွေးထားသလို အဆိုးဆုံးကိုလဲ မျှော်လင့်ထားဗျို့။ ယောကျာင်္းပဲဗျာ ဒေါင်ကျကျ၊ ပြားကျကျ၊ အလုံး အရပ်လျော့သွားတာမှ မဟုတ်ဘဲ။ စိတ်ဓာတ်ကျနေလို့တော့ အလကားပဲ အဲဒါ အရှုံးပေးတာပဲ၊ လုပ်စမ်းပါဗျ၊ ဘဝကို ရဲရဲကြီး ရင်ဆိုင်လိုက်စမ်းပါ၊ မှတ်ထားဗျို့ သုံးလောကထွတ်ထား မြတ်စွာဘုရားတောင် အတိုက်အခံနဲ့ မကင်ခဲ့တာ ကျနော်တို့လို သာမန်လူသားအဖို့တော့.........................။
ဒီ blog မရောက်ဖြစ်တာတောင် ကြာပြီ။ ဒါကြောင့် ခံစားချက်တွေ ခုမှ သိရတယ်။
ကိုယ့်ဆီ comment လာမပေးတာ ဒါကြောင့်ကိုး လို့ ထင်သွားပါတယ်။
ကြိုးစားပမ်းစား ရေးထားတဲ့ စာလေးတွေ စိတ်ပါရင် လာဖတ်ပါဦး။
အခုလောက်ဆိုရင်တော့ ချစ်ညီဖိုးစိန်တယောက် စိတ်ပြေလက်ပျောက် ဖြစ်နေလောက်ပီလို့ ယူဆရတာပဲ...
ဟုတ်ရဲ့ မဟုတ်လား ဆားပုလင်း ဖိုးစိန်...
ငါးတွေကို နုပ်နုပ်စင်းပစ်တာကို ဘာမှမပြောတဲ့ အလုပ်ရှင်တွေရထားတာ ဘာလိုသေးလို့လဲ။
ကော်မန့်ရေးသွားပါတယ် ... ဖိုးစိန်ရေ ....။
လတ်တလောခံစားချက်ကိုဖတ်ပြီး ... ဖိုးစိန်ကို နားလည်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တာတောတွေဖြစ်လာဖို့ တကယ်ကြိုးစားနေတာဆိုရင်တော့ တခြားမဖြစ်သေးတာတွေကို ခေါင်းထဲမထည့်ထားစေချင်ဘူး ...။ ဖိုးစိန်အဖေကိုလည်း လိမ်စရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်..။ အဖေက ဒီသားကိုမွေးထားတာပါ ..။ အဖေ့ကို ပြောလိုက်တာက ဘလော့ခ်မှာ ရင်ဖွင့်တာထက်ပိုပြီး သက်သာရာရနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ...။ ခေါင်းကိုက်တာက ဒီလိုဆိုးဆိုးရွားရွားကိုက်ရင် ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ် ...။ စွန့်စားဖို့မလိုအပ်ရင်မစွန့်စားပါနဲ့...။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါဦး ...။
လူဆိုး မကောင်းဘူး ဖတ်ရင်းနဲ့ကျနေတဲ့မျက်ရည်တွေ နောက်ဆုံးစာကြောင်းနဲ့ ရပ်သွားတယ် ဟင့်
မရဘူးနော် ဖိုးစိန်လက်မောင်းမှာ ငိုသွားတယ် ဒါပဲ ဟွန်းးးးးးး
မငိုပါနဲ့ ခေးရယ် အဲလေ
မငိုပါနဲ့ ကိုကိုစိန် ရယ်
မောင်လေးရေ... အခုလို ချရေးလိုက်တာလည်း တနည်းသက်သာရာ ရသွားပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ဘဝမှာ အဆင်မပြေတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေတော့ ဒီလိုပဲပေါ့။ ငိုချင်တဲ့အချိန် ငိုချလိုက်တာလည်း ကောင်းပါတယ်။ အဖေအမေတို့ဆီကိုတော့ ဖုန်းဆက်လိုက်ပါဦးလား။ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာရှိပါစေ မောင်လေး။
ဘယ်လို ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေ့ါအကိုရာ.... လူပဲ ..အခက်အခဲဆိုတာ
အကိုရေ... ညီလည်းဒီလို ပဲဖြစ်အောင် အားတင်းပြီး နေ ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့ တာပဲ..အကိုလည်း မှတ်မိမှာပေ့ါ..ညီပြော ပြ ဖူးတယ်လေ..။ ဒါပေမယ့် စိတ် ကို စိတ်နဲ့ ဖြေပေ့ါအကိုရာ...။ စိတ်ညစ်စရာကြုံလာရင် အပျော်ကိုတွေး..တွေးမရ ဘူးဖြစ်နေရင်..ဘာကြောင့်စိတ် ညစ်လည်းတွေးပေ့ါ...။ အဖြေဆိုတာပေါ်လာမှာပါ...။
ရည်မှန်းချက်မပြည့်သေးသမျှတော့ .... စိတ်ကို ထိန်း ပြီး အတည်ငြိမ်ဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုး စား ပါအကိုရာ...။